Miyuu Neymar Diyaar U Yahay Kulanka Man United Kaddib Markii
By Apdihakem Omer Adam	 On Oct 17, 2020
Tababaraha kooxda Paris Saint-Germain ee Thomas Tuchel ayaa ka hadlay haddiiba garabka weerar ee kooxdiisa ee Neymar JR uu diyaar u yahay kulanka adag ee ay Salaasada la ciyaari doonaan Man United ee ka tirsan UEFA Champions League.
Neymar ayaa laga reebay liiska kooxdiisa ee kulankii ay xalay guusha 4-0 ka ah ka gaadheen dhigooda Nimes markaas oo uu laba gool dhaliyay Kylian Mbappe.
Kulanka xalay ayaa yimid kaddib kaliya saddex maalmood markii uu Neymar matalay dalkiisa Brazil oo kulan isreeb-reebka koobka aduunka ah la ciyaaray dhigiisa Peru xilli uu saddexley goolal ah kasoo dhaliyay ciyaartaas.
Haddaba, Thomas Tuchel oo xaalada Neymar ka hadlay ayaa sheegay inuu diyaar u yahay ciyaaryahankiisu kulanka Red Devils isla markaana uu xalay kaliya sabab nasiimo u maqnaa.
“Ney wax dhib ah ma qabo, waanu wadahadalnay sidii aanu u wada hadalnay Kylian” ayuu yidhi macalinka ree Germany kaddib kulankii xalay.
“Waxaanu wada yeelanay wadahadal daacad ah waxaanan isaga u ogolaaday inuu nasto maanta, wuu nala joogi doonaa berrito, wuu tababaran doonaa waxaana uu u diyaar garoobi doonaa kulanka Manchester United, garoonka ayuu ku jiri doonaa hubaashii”
Apdihakem Omer Adam 69 posts
soon a trial in the case of the murder of Thomas Sankara
This One Factor Reveals the Finest Weight Loss Methodology for You, Examine Finds